Rosia : Sambom-pizahantany niteraka resabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2011 18:25 GMT
Ny folakandron’ ny Alahady 10 jolay 2011, dia nitsimbadika teo amin'ny tohodranon'i Kouibychev tao amin'ny ony Volga ilay sambo fitsangatsanganana “Bulgaria”. Araka ny atontan'isa ofisialy, dia mpandeha 129 no mbola tsy hita popoka sy heverina ho natelin'ny rano.
Matetika rehefa mandre loza sy voina tahaka izao ny olona dia mampahatsiahy ny toe-javatra sy fotoana niainany avy amin'izany ary eo ihany koa ny zavatra antenainy rahatrizay. Rehefa itrangan-doza i Rosia, dia ny fisian'ny voina tahaka izao matetika no fotoanan'ny firaisam-pirenena hiaraha-miory amin'ny niharam-boina, fotoana hanehoan'ny vahoaka firaisankina sy fifanajana matetika. Izany indrindra no antony nahatongan'ny Filoha Dmitri Medvedev namoaka didy hitsi-volana fa ho andro fisaonam-pirenena ny andro 12 jolay 2011.
Kanefa raha mamaky ny tontolon'ny bilaogy Rosiana, ny fijerena ny ho avin'ny firenena no hita manakona izany fisaonana izany, ary ho an'ny bilaogera maromaro, io faharendrehana sambo io no mariky ny hoavin'i Rosia.
Sambo entin"entona "Bulgaria" miakatra ao Volga. SaryWikipedia.
Tamin'ny voalohany anefa, ny fahasimban'ny sambo no tena niteraka adihevitra, na tamin'ny gazety izany na tamin'ny bilaogy. Na dia teo aza ireo vaovao isan-karazany, ny fahatsapana ankapobeny dia hoe toy ny vatapaty mitsingevana izy io . Ny filazalazana voalanjalanja sy miovaova momba an'i “Bulgaria” ao amin'ny Wikipedia Rosiana dia efa milaza zavatra : natsangana tamin'ny taona 1955, tantera-drano ny sisiny, tsy nisy fikojakojana ankapobe, niova anarana tamin'ny taon-dasa, niainga ny seranan-tsambo efa misy fihilanana 5 isan-jato, tsy mandeha ny motera ankavia, mpandeha 208 no tao anatiny raha tokony ho 140 farafahabetsany; izany rehetra izany no nahatonga ny sambo nilentika tao anatin'ny 3 minitra monja.
Tsy voatery ho tatsambo vao afaka hahita fa tsy mahazaka ranomasina ilay sambo “Bulgaria”, azo an-tsaina ihany koa ny fadinganana isan-karazany nataon'ny mpitantana mba hialàna amin'ny fanaraha-mason'ny manam-pahefana an-drano (mamy na masina) sy ny asa fisavana hafa .
Romodromotra ihany koa ny fahasosorana sy ny fahatezerana tao amin'ireo bilaogera. Voices from Russia naneho ireo fangatahana valifaty marobe, ary nanararaotra ny fisian'ny loza koa hisian'ny fifehezana henjana kokoa ao Rosia :
Aoka izay raha lazaina, maro ny loha hitsingidina vokatr'io. Hanatsoaka lesona ireo tompon'andraikitra tamin'ny loza, ny ankizy… Hatelin'izy ireo tanteraka izany atao hoe каторга (katorga : asa an-terivozona) sy ny vokany ao amin'ny Fonjaben'ny 1313 ao amin'ny Repoblikan'i Sakha… na handraman'izy ireo ny tsiro sy ny fahafinaretana isan-karazany ao amin'ny fonjaben'ny saikanosy Anadyr. Niady tamin'ny lalàna izy ireo ka ny lalàna no nandresy ! Tsy tsara ny mifananihany amin'i VVP [V.V. Poutine]… Mety hitranga ny toy ny hoe (tahaka ny vato mamirapiratra tarafin'ny masoandron'ny tendron-tany avaratra). Tsy tahaka an'ny repoblikana mahatalanjon'i Texas izany… tanàna nisy an'i Kenneth Lay nalaza tamin'ny Enron (naman'i GWB sy ny “kristiana” mpitabataba Teraka indray) izay tsy niditra am-ponja na dia iray andro aza. Afaka manao toy ny an'i Rosia ianao, izay ampidirina am-ponja ireo olona mpanao afera tsy mataho-tody… na toy ny an'i Texas, izay anafosafoina kosa ny jiolahin-tsambo mpanao afera. Amin'ny taona 2012, manana safidy ianao… safidio tsara… satria ny “valala tsy indroa mandry ambavahady”.
Mifanohitra amin'ny voalaza, nampiseho ny ahiahiny manoloana ny manam-pahefana ara-panjakana ny bilaogera maro, izay nanondro ny laza ratsiny amin'ny fitantanana ny vaovao na dia miharihary aza ny krizy sy ny voina. Izany no antony nahatonga ny vaovao ofisialy voalohany momba ny faharendrehan'i Bulgary nilaza momba ny loza fa tsy nilaza momba ireo niharam-boina.
Nalefa mialoha ny fanehoan-kevitra ataon'ny bilaogera LJ 999allan999, nisy akony noho ny fampahafantara tsotra ny karazana vaovao nisongadina farany mikasika ny loza ahitana lohateny mampisaintsaina :
Toy ny mahazatra. Lazaina amin'ny fomba ofisialy aloha fa «Tsy misy ny maty»…
Mpisera LiveJournal shri_boomer – tatsambo manamboninahitra – nilaza toy izany koa, ary nanambara ihany koa ny fahatezerany ireo mpandeha tamin'ny sambo hafa izay tsy nanao afa-tsy naka sary an'i Bulgaria teo am-paharendrehana :
Nandritra ny loza, tohina mafy tsy tamin'ny tsy fahaizan'ny Fanjakana manome karazana vaovao mazava ho an'ny fiarahamonina ihany aho fa nisy koa sambo hafa niserana fotsiny teo ilay sambo entin'entona teo am-paharendrehana, ao ireo olona mitsangana fotsiny eo amin'ny tetezana maka sary ny loza miseho miaraka amin'ny fakan-tsary sy ny finday teny amin'izy ireo. Izany no fihetsika tsy rariny izay miteraka fahatezerana ho an'ny hafa, ary tsy maneho afa-tsy zavatra iray ihany izany: lasa mihamafy fo ny olona, ka nanjary tsy manana ny maha-olona intsony.
Nampahatsiahy ny loza nitranga vao haingana i shri_boomer nanohy nitsikera ny fironan'ny fitondrana hanafina izay zavatra rehetra tsy mandeha sady manamafy ny fanaraha-maso amin'izay zavatra hita fa misosa tsara, na dia tsy misy olona hanaiky aza :
Ao avokoa ireo marika hamantarana fa tsy voafehin'i St. Pétersbourg intsony ny fitantana ny firenena [—]. Mandray fepetra vaovao foana ny fitondram-panjakana isan'andro mba hanamafisana ny fandriampahaleman'ireo olom-pirenena ao aminy sy hanatsarana an'i Rosia.
Nisy baomba nirefotra tao amin'ny [seranam-piaramanidina] ao Domodedovo : fanaraha-maso akaiky atao amin'ny mpandeha, ary nakatona i Domodedovo.
Asiana marika eo amin'ny fiara-manidina «An», asiana marika eo amin'ireo angidim-by Mi-8, asiana marika eo amin'ny sambo an-drenirano. Eny tokoa, fanampin'izany, asiana marika eo amin'ny 90 isan-jaton'ny tramways sy trolley-bus tsy fampiasa intsony ao an-tanàna, fiara fitateran'olona an'aliny, lakan-drano an-kilometatra an-tapitrisany sy fantsona fampitam-baovao, toby herinaratra an-jatony sy orinasa momba ny herin'aratra azo avy amin'ny tohodrano. Mila asiana marika avokoa izany rehetra izany, ary hamafisina ny fanaraha-maso atao amin'ny mpandeha. [—]
Taorian'izany, misy olona koa mety tsy hiraharaha ny hafa. Araka izany dia hisy ny Andro Fisaonana. Famindram-po fotsiny izany, fa tsy hisy olona hanatanteraka izany, raha tsy hoe miverina amin'ny taona nisian'ny zohy.
Amin'izany foto-pisainana mitovy izany, mpisera LiveJournal dr_lunikoff nampitaha ny vanim-potoana nampitsontsorika an'i Firaisana Sovietika sy ny toe-java-misy ankehitriny :
Mifandraika amin'izany, tadidiko tsara ilay tononkalo kely tamin'ny taona 1989, izay mifampitampita sy izay saika nahavoaraoka anay tao an-tsekoly. Nianarana tsianjery ny tononkalo (mba tsy ho tratrana'ny fikomiana am-body omby), ka izany no antony nahatadiavako azy. Namariparitra ny horohoro be mpahafantatra indrindra tamin'ny katastroïka [teny milaza ny fiarahan'ny loza sy ny perestroïka] ny tononkalo, (indrindra indrindra ny fanjavonan'ilay sambo “Admiral Nakhimov” tamin'ny taona 1986) izay misy fitovizana mampatahotra amin'ny zava-misy ankehitriny :
Sambo iray nilentika,
Voromby iray very,
Nitombo ny mpidoroka zava mahadomelina,
Tonga tao Rosia ny SIDA,
Sy ny hafa marobe mahasoso…
Ary tafala amin'ny lalamby ny fiaran-dalamby…
Fehiny, Viktor Perfilov an'ny Kazanskie vedomosti namehy ny tantara toy izao:
Tsy tanako ny tsy hiteny ilay fehezan-teny malaza tsaroako nataon'i Poutine tamin'ilay sambo nilentika “Koursk”, na dia mbola tsy ampy 10 taona aza aho tamin'izany fotoana izany :
– Inona no nitranga tamin'ny sambonao ?
– Nilentika izy.
Ary mbola tsy mahita lazaina i Medvedev ny momba izany. Mihatsapa hatrany hatrany ny krizy mihamiraikitra, ary tsy misy fihatsarany ny toe-javatra. Ary manoloana ny toe-javatra iainana ankehitriny, kely ny fanantenana amin'ny mety hahatontosany izany.